Chelsea oo qorsheeneysa in kooxda AC Milan ay ku dul qaado saxiixa xidig ka tirsan Barcelona – Gool FM
(Chelsea) 05 Dis 2018. Sida ay daboolka ka qaadeen wargeysyada kasoo baxa gudaha dalka England maanta oo Arbaco ah, Chelsea ayaa qarka u saaran in ay kooxda AC Milan ku garaacdo saxiixa laacibka Barcelona ee Denis Suárez.
Wargeyska “Express” ee dalka England ayaa wuxuu daboolka ka qaaday in kooxda Chelsea ay ka gudbin doonto aduun dhan 45 million pounds, si ay kula soo saxiixato laacibka kooxda Barcelona ee Denis Suárez suuqa furmi doono bisha Janaayo ee soo aadan.
Rossoneri ayaa xiriir la sameysay Barcelona si ay heshiis amaah ah kaga qaadato laacibka reer Spain ee khadka dhexe Denis Suárez, laakiin kooxda reer Catalonia ayaa iska diiday dalabka kaga yimid dhigeeda reer Talyaani.
Wararka ayaa waxay intaas kusii darayaan in Barcelona ay diyaar u tahay iibinta Denis Suárez suuqa furmi doono bisha Janaayo ee soo aadan.
Dhinaca kale tababare Maurizio Sarri ayaa wuxuu ka dalbaday maamulka kooxda Chelsea inay bixiyaan qiimaha uu doonayo inuu kula soo saxiixdo Denis Suárez sida ugu dhaqsida badan, maadaama uu ka dhiganayo bar-tilmaameedka koowaad ee suuqa bisha Janaayo.
RASMI: Madixii hore ee Fulinta Arsenal Ivan Gazidis oo loo Magacaabay Goddoomiyaha Cusub ee AC Milan